UGoogle ufuna ukucwangcisa uhambo lwakho ngeapp yohambo lukaGoogle | IPhone iindaba
UGoogle ufuna ukucwangcisa uhambo lwakho ngeapp yohambo lukaGoogle
UGoogle namhlanje usungule ii -apps zikaGoogle ezintsha zohambo lwe-iOS kunye ne-Android ngaxeshanye. Kubonakala ngathi akukho ndawo yeshishini apho inkampani "Ungabi mbi" ayifuni kuyichukumisa. Ngeli thuba, ikwajolise ekuququzeleleni iiholide zethu, enkosi kwesi sicelo simnandi esiquka nenguqulelo engaxhunyiwe kwi-intanethi yombonisi womxholo, ngale ndlela, sinokwazi nokujonga idatha ebalulekileyo nangona singenalo uqhagamshelo lwedatha, into ethile eqhelekileyo phesheya. Isikhokelo sabakhenkethi esiphathwayo esivela kwinkampani egcina olona lwazi lukhulu kwiiseva zayo, uGoogle uyayitshintsha ngendlela yayo.
Thatha lonke ulwazi malunga neeseva zabo ukwenza izikhokelo ezifanelekileyo zedolophu. Ukongeza, enkosi kwiindawo eziqhelekileyo zabahambi, iya kuvumela inkqubo ukuba ichonge ukuba zeziphi ezona ndawo zidumileyo kwindawo oya kuyo, ukuze ungaphoswa ziikona ezizodwa. Kodwa ayizizo zonke izinto eziya kuhlala zibonisa nje, Uhambo lukaGoogle luza kubonelela ngolwazi malunga nemozulu, iminyhadala kunye neengcebiso Enkosi ngokubekwa kweGPS, akukho mntu waziyo ukuba ungazenza njani ezi zinto ngcono kuneGoogle Maps. Asizukufumana kuphela ulwazi lwabakhenkethi, kodwa sizakufumana ulwazi olubalulekileyo njengamaziko ezempilo, iikhemesti, iishedyuli kunye namaxabiso otshintshiselwano ngemali.
Okwangoku, inezixeko ezingamakhulu amabini ezichaphazelekayo kwindawo yabakhenkethi kwindawo yogcino lwedatha, kwaye sinokucwangcisa iintsuku zethu ngenyathelo ngenyathelo, njengotyelelo. Njengoko besitshilo, inenqaku eliza kusivumela khuphela Lonke olu lwazi. Isicelo njengoko kungenakuba kungenjalo simahla, nangona okwangoku siyinxalenye yesiNgesi ye-iOS. Kwakhona uGoogle ufuna ukuhlela ubomi bethu nendlela esihamba ngayo, kwaye inyani kukuba ukuza kuthi ga ngoku bebeqhuba kakuhle. Siza kulinda uhambo lukaGoogle ukuze sikhule kancinci ukwenza uhlalutyo olunzulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » UGoogle ufuna ukucwangcisa uhambo lwakho ngeapp yohambo lukaGoogle
IOS 10 sele ifakiwe ngaphezulu kwe-34% yezixhobo ezixhaswayo
U-Apple uphanda ibug eshiya i-iPhone 7 ngaphandle kwenkonzo emva kokukhubaza imo yenqwelomoya